မြန်မာ့မီးဖိုချောင်က ထွက်သော အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များ | Page7| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
၂၀.၈.၂၀၁၉ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
အရိုးအတက်ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ထွက်လာတတ်တာမျိုးဖြစ်ပြီး တခြားအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို မဖိမချင်း၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မကန့်သတ်မချင်း ဘာလက္ခဏာမှမပြဘဲ ရှိနေတတ်တယ်။
>> ဘယ်သူတွေမှာ အရိုးအတက် ထွက်တတ်သလဲ?
အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းစင်ဖို့ ...
အလုပ်ခွင်မှာ အချိန်မီ ပြီးပြတ်အောင်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေ၊ အထက်လူကြီးရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ကွပ်ကဲမှုတွေ၊ အချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များတတ်ကြတာ မဆန်းလှပါဘူး။ ဒီလိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖြေလျော့ဖို့ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ?
လေ့လာမှုတွေအရဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတေ...